Qalabka saxda ah ee Saameynta ama Wacyigelinta Suxufiga | Martech Zone
Jimco, Febraayo 14, 2014 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Meltwater waxay kafaala qaade weyn u ahayd balooggeena. Waxaan ku sameynay webinar caalami ah iyaga oo ku saabsan dhageysiga bulshada oo camiran oo leh jawaab weyn. Anaguna waxaan diyaar u nahay inaan sii deyno faahfaahinta ugu horreysa iyaga! Kafaala qaadku wuxuu diiradda saarey alaabooyinkooda News iyo Buzz ee dhageysiga dhaqanka iyo bulshada, siday u kala horreeyaan, laakiin waxaan doonayey inaan soo qaado qayb ka mid ah wax soo saarkooda News ee xirfadlayaasha Xiriirka Dadweynaha taasoo noloshayda ka dhigaysa sidii saameyn tan fudud…
Meelaha ugu badan ee aan ka helo xirfadleyda Xiriirka Dadweynaha waxay ka yimaadaan cinwaankooda shaqsiyadeed waana dufcad iyo qarax ka xanaaqa sanduuqa sanduuqa. Dadkani waxay adeegsadaan aalado soojiidasho dhaqameed PR ah oo liis garaya cinwaankayga iimaylkooda oo iyagu SPAM-ka ayay iga sii daayaan. Ma fahmin sida loo sameeyo samee blogger Waana ku kalsoonahay saxafiyiinta inay jecel yihiin tabtooda xitaa kayar.
Waxaan uga jawaabayaa garoonada liita ama aan khuseynin si badheedh ah inuu qofku u qaato 5 daqiiqo si uu u arko haddii waxa ku jira ay khuseeyaan macmiilkooda. Uma maleynayo in badankood ay sidaa sameeyaan maadaama ay deg deg yihiin umana maleynayo inay saameyn ku yeelan doonto ficilladooda. Laakiin waxaa jira. Dadyowga aniga oo kale ah isla markiiba waxay u sheegaan inay yihiin Qashin si aynaan waligood ugu arkin garoon kale sanduuqayaga. Taasi waa runtii nasiib darro qofkaas PR - oo maalin uun laga yaabo inuu ku lahaa boggeena weyn.
Shalay, waxaan ka helay email emayl ah wakaaladda PR oo adeegsanaysa Qalabka fidinta PR ee Meltwater. Ma xusi doono cidda soo dirtay maadaama aysan iyagu khusayn - laakiin emaylku wuxuu ahaa HTML oo wata shaxanka oo wuxuu ku haystay ikhtiyaarka ugu fiican adduunka - ka jooji linkiga. Gujinaya xiriirkaas, waxaa lay keenay shaashad kale:
Wow, ikhtiyaar ah inaad ka saarto rukumadan ama xitaa dhammaan macluumaadka warbaahinta! Taasi waa mid awood badan, hufan waxayna haysaa hay'adda PR iyo Meltwater oo lagula xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta nidaamkooda. Xitaa ka sii xiiso badan ayaa ah ikhtiyaarka emaylka ka imanaya Meltwater ama loo maro adeegga emaylkaaga. Taasi waa heer xisaab celin dheeraad ah tan iyo inta badan macaamiisha emaylku ay bixiyaan awood ay ku mari karaan cinwaanada emaylka si otomaatig ah ama xitaa xannibaya.
Haddii aad hogaamineyso xiriir dadweyne oo xirfad leh ama wakaalad wacyigalin ah oo aad runtii rabto kooxdaada inay dhisaan xiriiro (sida ay noqon laheyd) oo lagula xisaabtamo, tani waa nooca qalabka aad ugu baahan tahay wacyigelinta. Maaha in la sheego Meltwater waxay leedahay in kabadan 350,000 oo xiriir oo warbaahineed oo keydkooda kujira iyadoo tan oo macluumaad ah mid walba kaa caawin doonta inaad hesho saxayaasha saxda ah iyo saxafiyiinta.
Bixinta: Qoraalkan MAYA kuma codsan Meltwater, aniga oo dhan bay ahayd.
Tags: garoonkaemaylka garoonkadejiyeyaal saameyn lehsuxuufiyeyayaalprxiriirka dadweynaha